Jly Andriamahavalisoa Girard : “Tokony homena helikoptera hiadiana amin’ny dahalo ny zandary” | NewsMada
Jly Andriamahavalisoa Girard : “Tokony homena helikoptera hiadiana amin’ny dahalo ny zandary”
“Tokony hisy helikoptera manokana homena ny zandary hoentina miady amin’ny dahalo. Helikoptera mahazaka olona mpanao vy very ny ainy eo amin’ny 15 raha kely indrindra miampy ny entana”, hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Andriamahavalisoa Girard.
Nohamafisin’ny Seg fa ao anatin’ny Foloalindahy ny zandarimariam-pirenena nefa hatreto tsy manana helikoptera hoenti-miady amin’ny asan-dahalo ny zandarimaria. Ny helikoptera an’ny tafika no ampiasaina amin’izao. Ireo helikoptera roa ananan’ny tafika, araka izany no ampiasain’ny zandarimaria amin’ny fanenjehana dahalo, saingy tsy natokana hiadiana amin’ny asan-dahalo anefa ireo helikoptera ireo, raha ny fanazavany hatrany. “Ireo anefa ny ananana ka entina miady. Noho izany, mitady helikoptera entina hiady amin’ny asan-dahalo ny zandarimaria, mahazaka olona eo amin’ny 15 eo ho eo raha kely indrindra miampy ny entana satria hiady amin’ny asan-dahalo ny zandarimaria, hisambotra ary hanolotra azy ireo amin’ny fitsarana ”, hoy izy.
Nomarihin’ity manamboninahitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ity hatrany fa raha zandary iray tsy afaka hiady amin’ny asan-dahalo. Raha misy ireo helikoptera mahazaka mpanao vy very ny ainy eo amin’ny 15 lahy ireo kosa, afaka mifanehatra amin’ny dahalo anjatony, araka ny fanazavany hatrany. Tokony hojeren’ny fanjakana akaiky, araka izany, ny helikoptera tokony homena ny zandarimaria mba hahafahan’izy ireo manao ny asany amin’ny fanenjehana dahalo. Tsy ampy rahateo ny fitaovana eo am-pelatanana, saingy na eo aza anefa izany, tsy miraviravy tanana ny zandary amin’ny fiarovana ny olona sy ny fananany.